Nezvedu - Jinan Mingchang Gadzira Co., Ltd.
Jinan Mingchang Kugadzira Co., Ltd.
Jinan Mingchang Kugadzira Co., Ltd. rakaumbwa muna 2008, kushandisa kugadzirwa Auto zvikamu, machine zvikamu, nokuchengetedza uye Kudzingwa zvikamu, Chisimbiso musoro, Chitubu, Electric chokushandisa nezvimwe simbi zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvemufashoni uye zvinoshandiswa zvakanyanya muakasiyana maindasitiri ekugadzira. Kwete chete ine huwandu hwakafara hwemusika wekutengesa epamusika, asi zvakare unotumirwa kuAsia, Europe neAmerica.
MC Kugadzira pamusoro pemakore agara achitevedzera "mhando yezvigadzirwa kuti urarame, kuvimbika uye kusimudzira masevhisi" zvinangwa zvebhizinesi. Kuzvipira kukupa iwe yemhando yepamusoro zvigadzirwa uye mhando masevhisi. Iva nehunyanzvi, yakazvipira dhizaini manejimendi timu, kubva kune chigadzirwa dhizaini, kugadzira chigayo, kugadzirwa maitiro, kune yega yega maficha uye maitiro ari kuomarara kuyedza uye kutonga.
Kwemakore mashoma apfuura ekugadzira uye manejimendi uye kuongorora, MC yakamisikidza yayo yega mhando manejimendi manejimendi uye yakapasa iyo ISO9001: 2008 yemhando system chitupa. MC yekugara ichiita pfungwa yevatengi kukosha kwekusika kwevatengi zvakagadzirirwa zvigadzirwa kusangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana, uye nekuenderera uchipa vatengi mhinduro nemagetsi matekinoroji. Kuenderera mberi kwekutsvaga uye hunyanzvi, uye kugona.
Gamuchira noushamwari uye uvhure miganhu yekutaurirana. Isu tinowirirana nemumwe wako akakodzera!
· China Inotungamira Kuburitsa Tekinoroji
· Yakakwirira Hunhu uye Yemakwikwi Mutengo
· Huru Kugadzira Mano
· Kurumidza Kuendesa
· Makore gumi nematatu 'Ekugadzira Chiitiko
· Yakanaka Kutengesa uye Mushure mekutengesa Service
· Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasi rese
· Yepamberi michina uye Kwakanaka matarenda